ebook တစ်ခု Links များသို့မဟုတ်အောက်ခြေမှတ်စုများအတွက်? | eReaders အားလုံး
Joaquín Garcia က | | eBooks, စာဖတ်သူများ, ပြုပြင်မွမ်းမံ
ebooks ၏ပုံသဏ္ာန်အရစျေးကွက်အဆင့်သာမကထုတ်ကုန်တစ်ခုဖန်တီးရာတွင်သာမကယခုအချိန်အထိဘောပင်နှင့်စက္ကူဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောထုတ်ကုန်ကိုမည်သို့ဖန်တီးမည်ဆိုသည့်အငြင်းပွားမှုများစွာပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ နောက်ကျော 2011 ခုနှစ်, အ New York Times ကို အမည်ရဆောင်းပါးထုတ်ဝေခဲ့သည် အီး - စာအုပ်သည်အောက်ခြေမှတ်ချက်ကိုသေစေမည်လော။ ရည်ညွှန်းလုပ်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် အောက်ခြေမှတ်ချက်များ ဒါပေမယ့်စာသားထက်ကျော်လွန်။ , ထုတ်ဝေသူနှင့်အီလက်ထရောနစ်စာအုပ်၏အလုပ်အကိုင်အပေါ်ကြမ်းတမ်းစွာဝေဖန်မှုများရှိခဲ့သည်။ Scott berkun ဒီအငြင်းပွားဖွယ်ရာဆောင်းပါးကိုသူ့ဘလော့ဂ်တွင်ကောက်ယူခဲ့ပြီးဝေဖန်ရေးထင်မြင်ချက်များကိုပိုမိုအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည် ထုတ်ဝေသူလယ်. အောက်ခြေမှတ်ချက်များအမြဲတမ်း assimilated ပါပြီ လင့်များ အီလက်ထရောနစ်ပုံစံ, ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိပါသလား ဤအရာအလုံးစုံသုံးနှစ်ကျော်ပြီးသွားပြီ။ လင့်များထပ်ဖြည့်မည်လား၊ အောက်ခြေမှတ်စုကိုကိုယ်စားပြုမည်လားဆိုသည်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအငြင်းပွားမှုများမှာခိုင်လုံသောအချက်ဖြစ်သည်။ ebook ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုစီးပွားရေးနယ်ပယ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်ဖြစ်စေ၊
ဆက်မလုပ်မီဆောင်းပါးပါရော၊ ပါရောပါထင်ဟပ်စေလိုသည် Berkun ၏ဘလော့ဂ် သူတို့ပြုသောအမှုပေမယ့်အဓိပ္ပါယ်သို့အများကြီး delve ကြဘူး။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ခြေမှတ်စုများနှင့်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုကြည့်။ ၎င်းတို့သည်လက်ရှိလင့်များ၏ပုံနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည်။ RAE အရအောက်ခြေမှတ်ချက်တစ်ခုမှာ -
ပုံနှိပ်သို့မဟုတ်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အတွက်စာသားအပြင်ဘက်ကြောင်းမဆိုမျိုးသတိပေး, ရှင်းပြချက်, မှတ်ချက်သို့မဟုတ်သတင်း
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ စာအုပ်၏ပြင်ပရှိမည်သည့်အရာသည်မဆိုအောက်ခြေသို့မဟုတ်အောက်ခြေဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အောက်ခြေမှတ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အများစု၏လမ်းကြောင်းမှာအောက်ခြေမှတ်စုများကိုစာအုပ်သို့မဟုတ်စာသားမကုန်မှီအမြဲထားလေ့ရှိသည်။
ယခုအချိန်အထိများစွာသောသူတို့သည်ဤစံနှုန်းအတိုင်းလိုက်နာပြီး e-book အတွက်အမြင်အာရုံ stand-in များကိုဖန်တီးပြီး၎င်းသည်အောက်ခြေမှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အခြားသူများကသူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုပိုမိုသတိပြုမိကြပြီး၊ တူညီသောအရာဟုအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောပုံမှန် html လင့်ခ်များကိုဖန်တီးရန်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအပ်နှံခဲ့ကြသော်လည်းတူညီခြင်းတော့မရှိကြပါ။
html link ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါစကားလုံးဒါမှမဟုတ်စကားလုံးတွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးစာဖတ်သူကိုအခြားတစ်ယောက်ဆီပို့ပေးလိုက်ပါ။ 'စာရိုက်'သင်၏မှတ်စုများသို့မဟုတ်' လင့်များနှင့်အတူ။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်သည့်အခါအောက်ခြေမှတ်စုကိုထည့်မည့်အစားအခြားစာစောင်တွင်ထိုစကားလုံးသို့မဟုတ်အတွေးအခေါ်ကိုရှာဖွေပြီးပထမ link သို့မရောက်မှီတိုင်အောင် ဆက်၍ ဆက်သွားသည်။ ဒီတော့ဒီစနစ်နဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်ဖို့အနည်းဆုံး ၅ နှစ်လိုတယ်။ ဤပြသနာသည် ebook ထဲတွင်စာမျက်နှာပုံစံမတည်ထောင်ရသေးသောကြောင့်အပြည့်အဝမပြေလည်သေးသောကြောင့် link နှင့်အောက်ခြေမှတ်စုနှစ်ခုစလုံးတန်ဖိုးရှိသည်။
တစ်ဦးကဦးဤပြwholeနာတစ်ခုလုံးသည်၊ ချစ်သူ အရာအနည်းငယ်သာသဘာဝကျပါတယ်, သို့သော်သူဤမျှလောက်ဆွဲသောကောက်ချက်တစ်ခု Berkun ဆောင်းပါး၏ရေးသားသူအဖြစ် New York Times ကို ebook သည်စာကိုမသတ်နိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းသည်စာအုပ်ကိုမသတ်နိုင်ခြင်း၊ ebook သည်စာမျက်နှာကိုသတ်ပစ်လိုက်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သည်အထိအောက်ခြေမှတ်စုများ၊ လင့်ခ်များသို့မဟုတ်အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထည့်သွင်းခြင်းအားစာဖတ်ခြင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့်အရာနှင့်ဆက်နွှယ်နေ ဦး မည်။ ဘာမှမ ဤအရာအားလုံးနှင့်အတူကျွန်ုပ်သည် ebook စာမျက်နှာတစ်ခုကိုမည်သည့်အရွယ်အစား၊ မည်သည့်ဖောင့်အမျိုးအစား၊ လိုင်းအကွာအဝေးစသည်တို့ကိုကြိုတင် သတ်မှတ်၍ အချိန်ကာလရောက်မည်ကိုစဉ်းစားမိသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထိုကဲ့သို့သောစျေးနှုန်းသို့မဟုတ်ပုံစံအဖြစ်။ မထင်ဘူးလား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » Software များ » eBooks » လင့်ခ်များသို့မဟုတ်အောက်ခြေမှတ်ချက်များ?
Fnac အငယ်တန်းတက်ဘလက်၊ Bq နှင့် Fnac တို့၏ကလေးများလောင်းသည်